Vanoti hurongwa hwekuona kuti vana vangani vanoda rubatsiro huchiri kuenderera mberi.
Asi bazi reUnited Nations rinoona nezvevana reUNICERF rinoti muZimbabwe, Malawi neMozambique nyika nhatU dzakawirwa nedambudziko redutumupengo, vana miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu, 1,5 million vakanganisirwa hupenyu hwavo.
MuZimbabwe UNICERF inoti vana vakakanganisirwa hupenyu vanodarika churu zana. UNICERF iri kutsvaga mari inodarika zana remamiriyoni nemakumi maviri US$122 million kubatsira vana ava.
Mari iyi iri kubatsira vana vakasara vari nherera, vasina chekudya nezvimwe.
Zvichakadaro, Hurumende yakaendesawo mota dzinokwanisa kusimudza matombo kuti dzitsvage vanhu gumi nevatanhatu kugangu uye vapfumbamwe kurusitu.
Nzvimbo dziri kusimudzwa matombo idzi ndidzo dzakawanikwa nembwa dzinoshandiswa mukutsvaga mitumbi dzakabva kuSouth Africa. Vanhu mazana matatu vachiri kutsvagwa sezvo vasiri kuwanikwa kubva zvakarohwa Chipinge neChimanimani nedutumupengo.